IWARNERMEDIA IFUMANA INTLOKO YENTLOKO YABANTWANA YE-EMEA EVANESSA BROOKMAN - IINDABA
Ngokukhawuleza kwi-Global Bulletin, iWarnerMedia yonyula uVanessa Brookman njengentloko yabantwana kwi-EMEA, ukuFumanisa ukuhambisa ii-sequence ezimbini ezingabhalwanga ngelixa i-Channel 5 izakufumana iidrama kunye ne-Göteborg Film Festival ikhetha iTove njengemovie yayo yokuvula.
IWarnerMedia ukwazisile oko UVanessa Brookman inokunyuselwa kwindawo esandula ukwenziwa yentloko yabantwana ye-EMEA, ngokufanelekileyo kwangoko.
Ukukhutshelwa kuzisa, ixesha eliphambili, yonke imisebenzi yeWarnerMedia, yokuhlela kunye neembophelelo zokwenza izinto zomxholo wabantwana kunye nabavelisi bezitishi kwindawo engaphantsi kwesinye. Iphothifoliyo edityanisiweyo iqulethe Inethiwekhi yopopayi , IBoomerang , Ukuqamba kwaye Ikhathuni ukongeza kwiipropathi zedijithali kwiqela lesithathu kunye neqonga lokusasaza iWarnerMedia.
U-Brookman uya kusebenzisana ngononophelo UJohannes larcher kwaye UChristina Sulebakk e I-HBO Max ukonyusa ukhetho lweqonga labantwana kwangoko kunokuba lisungula kwiimarike ze-EMEA.
Ugqirha wezilwanyana oneminyaka emithandathu ubudala kwi-WarnerMedia, i-Brookman isebenze kwimathiriyeli ephezulu yomxholo, abavelisi, imisebenzi yedijithali kunye ne-induction yequmrhu. Kwisikhundla sakhe njenge-VP yezinto ezinomxholo, abavelisi kunye nedijithali ye-U.Ok. naseMantla Yurophu wakhokela ubuchule bokuqulatha izinto zabantwana benkampani kunye nezikhundla zokuzonwabisa ezisisiseko.
Ukuchongwa kugqiba iveki exakekileyo eWarnerMedia, emva kokuba kwaziswe ngoLwesithathu ukuba Iris Knobloch , umphathi wesizwe eFrance naseBenelux, eJamani-Ostriya-Switzerland, wayilungelelanisa amaqela olawulo kwimimandla yonke.
umdlali wekarati ongumDatshi
Ukufumanisa igunyazise ulandelelwano olutsha olutsha lwayo Imfuno ebomvu kwaye IHGTV iinethiwekhi kwiU.Ok.
Ilanga, uLwandle kunye nokuTyeba kakhulu , eveliswe yi Baphotha igolide , izakusasaza kwi-Quest Red kwaye ilandele abakhenkethi base-Bhritane kuhambo lweholide e-Antigua njengoko besebenza nabasebenzi abaziingcali ukukhathalela amanqaku obunzima. IHGTV izodlala indawo yokuhlala kwiAir TV's Ukuhlangulwa kwabaDala , elandela amakhaya asebenza ngokudibeneyo ukulungisa izakhiwo ezibi kakhulu kunye nenqaba yamanzi engenamntu kunye necawa yamaWesile engasebenziyo.
Ababukeli bethu bayathanda ukubona amabali emva kwexesha lobomi obusisikhumbuzo, nokuba kukulwa okanye ukungalwi kweendawo zomzimba ezendeleyo 'eLangeni, kuLwandle kunye nokuTyeba kakhulu' okanye ukuncama zonke izinto ukudala indlu yeenjongo zakho 'kuHlangulo-mandla,' utshilo u-U. Kulungile. kunye ne-Ireland intloko yendlela yokuphila kunye nabenzi bokuzonwabisa UClare Laycock .
Isiteshi 5 kwiU.Ok. uthumele imidlalo emibini emitsha evela Ibhodi eqhotyoshwayo , ukuya Ibhodi ebhodini usisi firm.
Carly waddell umsesane wokuzibandakanya
Umhla wokugqibela , ebhalwe ngumlobi-bhanyabhanya otyunjwe ngu-Bafta uGareth Tunley (I-Ghoul), uyintandokazi ye-noir isibini seentatheli ezithandana nomntu obhinqileyo owayenomsebenzi wokuba abhale iphepha lakhe. UMike Benson (uCold Call) uzakusebenza kumvelisi kaRhulumente noHerbert Kloiber kwaye URebecca Davies (Umnxeba obandayo) uvelisa. Ulandelelwano lunokuveliswa ngokudibana ne-Night Train Media kunye nokuhanjiswa ngama-Abacus Media Rights.
Utitshala , Yenziwe ngu UBarunka O'Shaughnessy (Motherland) kunye nomvelisi we-govt uMike Benson, ulandelela umqeqeshi welizwe obomi bakhe bujika emva kokuba etyholwa ngokudibana ngokwesondo nomnye wabafundi bakhe beekholeji. Ngaphandle kokukhumbula ngokuhlwa kumbuzo, kuya kufuneka avavanye afumanise okwenzekileyo kwaye acacise ukuba uchonge ntoni. O'Shaughnessy izakusebenza umbhali okhokelayo nge UDom Leclerc (I-Syndicate) ukwalathisa.
Isibhengezo silandela uthotho lwempumelelo yedrama kwiShaneli 5 kunye Abakhohlisiweyo kwaye Zonke izidalwa ezinkulu nezincinci , Ukuqala kwayo ngokulandelelana okukhulu ukusukela ngo-2016.
Ukuqalisa ngoJanuwari 29, amashumi amane anesine Umnyhadala weFilimu waseGothenburg iya kuvulwa ngenkulumbuso yaseSweden ye- Zaida Bergroth’s Tove , Ukungeniswa kweSweden kukhuphiswano loMboniso wamaZwe ngamaZwe. Umboniso bhanyabhanya uza kudlala kwi-100% kumdlalo we-Nordic okhuphisana nawo kwi-intanethi.
brad kunye netori fiorenza
Ukuqala ukuphela kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, umzobi UTove Jansson Uzifumana ekwisibini sokutshintsha emsebenzini wakhe, ebuza ngemibuzo ayikhethileyo. Emva komlawuli weqonga lomdlalo weqonga uVivica Bandler, into eyenziwayo ekhulisa imilenze, ekugqibeleni yajika yaba yinto eqhelekileyo kwilizwe jikelele Umhlali iincwadi zabantwana.
UTove uqikelelwa kumdlalo weqonga ngo Eeva Putro kwaye iveliswe ngabavelisi beHelsinki-filmi UAndrea Reuter kwaye UAleksi Bardy nge Anagram eSweden ukuvelisa kunye. ElaseDenmark InqanabaK iphatha ukuthengiswa okupheleleyo kwihlabathi liphela.
UJessica ukubheja ngexabiso elifanelekileyo nge2020
Ikrisimesi eyenziwe yayalela ukuqaqanjelwa
umgwebi ukholo lokwenene
Ngaba ii-Dominos zivulekile ngeKrisimesi